Maxay tahay sababta loo baajiyay doorashooyinka golaha deegaanka Somaliland? - BBC News Somali
Maxay tahay sababta loo baajiyay doorashooyinka golaha deegaanka Somaliland?
28 Nofembar 2018
Image caption Guddiga doorashooyinka Somaliland
Guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay in markale dib loo dhigay doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland.
Guddiga ayaa arrintan u sababeeyay caqabada dhowr ah oo ay kamid yihiin in xal loo helo saami qeybsiga kuraasta iyo in miisaaniyadii lagu geli lahaa doorashada aanan wali laheyn.
Dhaqaalahan ayuu guddiga sheegay in ay bixin jireen dowladda iyo beesha caalamka oo sida uu hadalka u dhigay walaac ka muujiyay dib u dhaca doorashooyinka, haatan labaduba aanan waxba laga heyn.
''Beesha caalamka waxay arkeen in doorashooyinka ay dib u dhacayaan oo wakhtigii loogu talo galay aysan ku qabsoomeynin, qiimeyn ayay sameeyaan oo haddii ay arkana inay dib u dhacday waa inay joojiyaan dhaqaalahooda sababtoo ah lacagta meel cidla ah lagu ma shubayo'' waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Cabdiqaadir Iimaan oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland.
Somaliland oo dawladda Faderaalka ku eedaysay dagaalka Tuka-raq
Magacyada dadkii ku dhintay weerarkii Gaalkacyo
Guddiga ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in diiwaangelinta dadka ay noqotay caqabad kale oo u baahan dhaqaale, waxay intaa ku dareen inuu jiro muran u dhexeeya iyaga iyo xisbiga waddani oo sheegay in aanay ku kalsooneyn guddiga doorashooyina Somaliland.
Guddoomiyaha ayaa mar ay BBC-du wax ka weydiisay xiliga la qabanayo doorashada wuxuu sheegay in aysan iyagu ba garaneyn xiliga, balse ay ku xirantahay golayaasha deegaanka Somaliland.